कस्ताे अचम्मको ठाउँ? जहाँ आमाकै अगाडि मनाइन्छ सुहागरात ! - Everest Dainik - News from Nepal
कस्ताे अचम्मको ठाउँ? जहाँ आमाकै अगाडि मनाइन्छ सुहागरात !
मानव जातिका लागि यौन पनि आवश्यक छ । विश्वका सबै जसो समाजमा यौनसम्बन्धि निश्चित मापदण्ड र अनुशासन रहेका छन् ।
तर यस्ता मापदण्ड समाजपिच्छे फरक रहने गरेका छन् । हामीलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर आमाकै अगाडि छोरीले सुहागरात मनाउने चलन भएको देश पनि छ ।
नेपाली समाजमा आमाबुवाका अगाडि यौनसम्बन्धि कुराकानी गर्नु समेत असभ्य मानिने गरिन्छ । हामीकहाँ यौनसम्बन्धि विभिन्न वर्जना रहनुले पनि यसो भएको हुनसक्छ ।
हामीकहाँ बिहे निकै धुमधामले गर्ने गरिन्छ तर जब दुलाहा-दुलहीको सुहागरातको कुरा आउँछ त्यसलाई अत्यन्त गोप्य राखिन्छ र त्यसबारे खुलेर कुरा गर्नुलाई समेत असभ्यता मानिने गरिन्छ ।
झन् आमाबुवा या परिवारका अन्य अभिभावकका समू त यस्तो कुरा गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन ।
तर, कोलम्बियामा भने एउटा रोचक परम्परा रहेको छ । त्यहाँको काली भन्ने ठाउँमा छोरीले सबैभन्दा पहिले यौन सम्पर्क गर्दा आफ्नी आमालाई साक्षी राख्नु पर्ने चलन रहिआएको छ ।
त्यस्तै फ्रान्सको चारिवारी समुदायमा दुलाहा-दुलही सुहागरात मनाइराखेका बेला छिमेकी र घरका अन्य सदस्य भाँडाकुँडा बजाएर कोलाहल मच्चाउने गर्छन् । उनीहरूमा यसो गर्नाले नवदम्पत्तिबीच प्रेम झनै प्रगाढ हुने विश्वास गरिन्छ ।
त्यस्तै ग्रीसको एउटा समुदायमा विवाहको पहिलियो रात बेहुला-बेहुलीको प्रथम समागमभन्दा अघि उनीहरूलाई सँगै स्नान गराइन्छ र त्यसपछि उनीहरूको अनुहारमा कालो मोसो दल्ने गरिन्छ ।
त्यस्तै रोमानियाको एउटा समुदायमा सुहागरातभन्दा अघि केटाका साथी र आफन्तहरू नक्कली बन्दुक देखाएर केटीलाई अपहरण गर्ने गर्छन् जसलाई ‘ब्राइड न्यापिङ्’ भन्ने गरिन्छ ।
तर यी सबै मध्ये कोलम्बियामा प्रचलित परम्परा भने झनै अचम्मको रहेको छ ।
त्यहाँ नव विहाहित दम्पत्तिलाई राति सुत्न जुन कोठा दिइन्छ त्यहाँ पहिलेदेखि नै दुलाहीकी आमा उपस्थित रहने गर्छिन र उनकै सामुन्ने नवविवाहित जोडीले सुहागरात मनाउनु पर्ने हुन्छ ।